Isibindi sentombazane ethunjwe eFilidi sisindise namanye eNquthu | News24
Isibindi sentombazane ethunjwe eFilidi sisindise namanye eNquthu
Durban – Intombazane eneminyaka engu-18 ubudala esinde namanye amane bethunjwe amadoda abebahambisa eMaputo, eMozambique.
Le ntombazane edabuka eFilidi ithunjwe isendleleni eya ekhaya elokishini laseBhekuzulu ngoLwesibili olwedlule.
“Le ntokazi ithunjwe isendleleni eya ekhaya kanti kuthiwa ibigcinwe namanye amane eNquthu. Le ntombazane ithe ngesikhathi besagcinwe kule ndawo abasolwa bazama ukuyidayisa,” kusho uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uWeziwe Thusi.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Nqobile Gwala uthe la mantombazane abegcinwe kulo muzi atholakale kuwo ngesikhathi abasolwa besalinde ukukhokhwelwa imali yokuwahambisa eMozambique.
NgoLwesihlanu ezintatha, le ntombazane yaba nesibindi yakwazi ukuphunyula yahammba ngezinyawo iphindela ekhaya.
Yafika ekhaya yatshela umama wayo konke okwenzeka, wabe esebikela amaphoyisa okuyiwo asukuma ngokushesha ayogasela kulo muzi.
Kwabe sekuboshwa abasolwa ababili abaseminyakeni ephakathi kuka-20 no-27 ubudala ngecala lokushushumbisa abantu.
“Siyayihalalisela le ntombazane ngokuhlakanipha kwayo, ngoba ukube ayizange ibe nesibindi sokubaleka, bebengeke basinde nalaba abanye ebithunjwe nabo,” kuqhubeka uThusi.
Ubaba wale ntombazane uthi namanje isavevezela ngoba isacabanga ukuthi kuyiphutha layo ukuba ithunjiwe, kubika i-Daily News.